Nin weerar ka fuliyay Masaajid ku yaala dalka Kanada – XAMAR POST
By Mohamed Abdi Last updated Mar 20, 2022
Dad ku cibaadaysanayay masaajid ku yaala dalka Kanada ayaa xakameeyay nin la sheegay in uu faas watay oo uu ku weeraray Masaajid ku yaala dalka Kanada salaadii subax ee shalay oo Sabti aheyd, sida ay booliisku sheegeen.
Ninkan oo 24 jir ayay boolisku ka xireen goobta.
Booliska ayay arrintan u suura gashay, kadib markii mid kamid ah jamaacadii halkaa ku tukaneysay uu kahortagay ninkan, faaska uwatayna uu ka qaaday kadibna gacmaha kahaayay ilaa ay Boolisku uga imaanayeen, sidaana lagu xiray.
Sida uu warbaahinta u sheegay Imaamka Masaajidkaasi ,qaar kamid ah dadkii halkaa ku cibaadeysanayay ayay dhaawacyo fudfud soo gaareen.
Dhacdadan ayaa waxaa ilaa hadda ka hadlay Rai’sulwasaaraha Kanada Justin Tredue wuxuuna aad u maanay sida geesinimada leh ee ninkan weerarka soo qaaday looga horagtagay , wuuxuna sheegay in arintan aysan ka turjumeynin dhaqanka Dadka ree Kanada aadna uu uga xun yahay.
RW Rooble Oo War Kasoo Saaray Xilka Qaadista Guddoomiyihii Guddiga SEIT Ee Hirshabeelle